Inona no niova momba ny fitorahana bilaogy orinasa nandritra ny taona maro? | Martech Zone
Raha nanaraka ahy ianao nandritra ny folo taona lasa, dia fantatrao fa nanoratra aho Fitorahana bilaogy ho an'ny Dummies tamin'ny taona 2010. Na dia nisy fiovana goavana aza ny tontolon'ny haino aman-jery nomerika tao anatin'izay 7 taona lasa izay, tsy azoko antoka fa be loatra ny fiovana raha ny momba ilay boky sy orinasa mamolavola paikady fitorahana bilaogy orinasa. Ny orinasa sy ny mpanjifa dia mbola noana amin'ny fampahalalana marobe, ary ny orinasanao dia mety ho loharano tadiaviny.
Ka inona no niova tamin'ny bilaogy orinasa?
Competition - amin'ny orinasa rehetra saika mandefa bilaogy orinasa, kely ny vintana handrenesana ny feonao eo amin'ny vahoaka… raha tsy hoe mandefa zavatra miavaka ianao. Ireo bilaogy 7 taona lasa izay dia teny an-jatony vitsivitsy ary angamba nanana sary kely dia kely. Amin'izao fotoana izao, ny horonan-tsary sy sary dia manjaka amin'ny atiny voasoratra. Ny atiny dia tsy maintsy dinihina tsara ary soratana tsara kokoa noho ny mpifaninana rehetra raha manantena ianao fa hahasarika ny fifamoivoizana sy ny fiovam-po mifandraika izany.
Frequency - Miara-mivoaka ny mpanjifa sy ny orinasa, be loatra ny atiny vokarina ary tsy lany andro izany. Izahay dia nijery ny fahita matetika amin'ny bilaogy ho toy ny lalao kisendrasendra - ny lahatsoratra rehetra dia nampitombo ny mety hahitana ny atiny, hojerena, hozaraina ary hifandraisana. Amin'izao fotoana izao dia mivoatra isika tranomboky atiny. Tsy momba ny fitadiavana sy ny matetika intsony izany fa ny fananganana lahatsoratra tsara lavitra noho ny nataon'ilay mpifaninana aminao.
Media - miaraka amin'ny isa amin'ny teny, niova tanteraka ny fijerin'ny atiny. Ny safidin'ny bandwidth sy streaming tsy voafetra dia mametraka podcast sy horonan-tsary eo am-pelatanan'izay misy finday avo lenta. Miezaka mandefa atiny miavaka amin'ny alàlan'ny fampitaovana rehetra izahay mba hahatrarana ireo loharano mety.
Mobile - na dia miaraka amin'ireo mpanjifanay B2B orinasa aza dia mahita fananganana marobe an'ireo mpamaky finday manerana ny tranonkalan'ny mpanjifanay izahay. Ny fananana fisiana finday haingam-pandeha sy mahavariana ary mandray andraikitra dia tsy safidy sy safidy intsony.
Website Builder dia namolavola ity infographic mahatalanjona ity, The Toetran'ny indostrian'ny bilaogy & The Ultimate Beginners Guide momba ny fomba famoronana bilaogy izay mandehandeha aminay amin'ny alàlan'ny sehatra fitorahana bilaogy orinasa, demografika mpamaky, fitondran-tenan'ny mpamaky, toro-hevitra amin'ny fanoratana, fizarana ara-tsosialy ary famindrana fiovana amin'ity infographic ity.
Tags: 2017fitorahana bilaogybilaogy orinasafizarana media sosialyfanjakan'ny bilaogywebsitebuilder